Nhau - Basa reOrganic Fertilizer
Organic fetiraiza inobva muzvirimwa kana mhuka.
Icho chinhu chekabhoni chinoiswa muvhu kuti ipe chikafu chemiti seiri basa rayo guru.
Kubudikidza nekugadziriswa kwezvinhu zvehupenyu, mhuka nemiti marara uye zvisaririra zvemiti, izvo zvine chepfu uye zvinokuvadza zvinobviswa, izvo zvakapfuma mune yakawanda nhamba yezvinhu zvinobatsira, kusanganisira akasiyana ma organic acids, peptides uye zvakapfuma zvinovaka muviri zvinosanganisira nitrogen, phosphorus uye potasium.
Iyo haigone chete kupa yakakwana nzwisisika yezvirimwa, asi zvakare ine yakareba fotereza maitiro.
Inogona kuwedzera uye kumutsidzira ivhu rehupenyu hwezvinhu, kusimudzira hutachiona hwehutachiona, kugadzirisa hunhu uye makemikari zvivakwa uye zviitiko zvehupenyu hwevhu, unova iwo mushonga mukuru wekugadzirwa kwechirimwa.
Organic fetiraiza, inowanzozivikanwa sefarmeriya fetiraiza, inoreva kunonoka-kuburitsa fetiraiza iine huwandu hwakawanda hwezvinhu zvipenyu, mhuka nemiti zvakasara, tsvina, tsvina yehupenyu nezvimwe zvinhu.
Organic fetiraiza ine kwete kwete chete yakawanda yezvinhu zvakakosha zvinhu uye microelements, asi zvakare yakawanda ye organic michero.
Organic fetiraiza ndiyo fetereza yakakwana kwazvo.
Iko kushanda kwe organic fetiraiza mukugadzirwa kwekurima kunonyanya kuratidzwa mune zvinotevera zvinhu:
1. Kuvandudza ivhu nekubereka.
Kana fetiraiza ye organic ikaiswa muvhu, organic organic inogona kunyatso kugadzirisa mamiriro epanyama uye emakemikari uye zvehunhu zvevhu, kuibvisa ivhu, kusimudzira kugona kwekuchengetedza fetiraiza uye kugovera uye kugona kwevhu, uye kugadzira ivhu rakanaka mamiriro yekukura kwezvirimwa.
2. Wedzera goho uye mhando.
Organic fetiraiza yakapfuma mune zvakasikwa zvinhu uye zvakasiyana zvinovaka muviri, ichipa chikafu kune zvirimwa. Mushure mekuora kwe organic fetiraiza, inogona kupa simba uye zvinovaka muviri kune ivhu hutachiona zviitiko, kukurudzira zviitiko zvehutachiona, mhanyisa kuora kwezvinhu zvakasikwa, uye kugadzira zvinhu zvinoshanda zvinogona kusimudzira kukura kwezvirimwa uye nekuvandudza mhando yezvirimwa zvigadzirwa.
3. Kuvandudza kushandiswa kwefetiraiza.
Organic fetiraiza ine zvakawanda zvinovaka muviri asi yakaderera hama zvemukati, inononoka kuburitswa, nepo chemakemikari fetiraiza ine yakakwira yeyuniti yezvakagadzirwa zvemukati, zvishoma zvikamu uye nekukurumidza kuburitsa. Iyo organic acids inogadzirwa neyakaora yezvinhu zvakasikwa inogona zvakare kukurudzira kuparara kweicherwa zvinovaka muviri muvhu nefetiraiza. Organic fetiraiza uye chemakemikari fetiraiza zvinokurudzirana, zvinoenderana nekudyiwa kwezvirimwa uye nekuvandudza kushandiswa kwefetiraiza.
Bulk Organic Fertilizer Vanopa, Organic Fetiraiza Mugadziri, Organic Fetiraiza Yekudyara, Organic Fertilizer Kugadzira, Organic Compound Fetiraiza, Humic Acid Organic Fertilizer,